သြစတြီးယားမှာ နာဇီလက်ထက် သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ယေဟောဝါသက်သေ ၃၁ ယောက်ကို ဂုဏ်ပြု
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား ဆားဗီးယား (စီရီးလစ်) ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် တဂါးလော့ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂယ်လ်) ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗီယက်နမ် မြန်မာ ယူကရိန်း ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အဇာဘိုင်ဂျန် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အီတလီ
သြဂုတ် ၂၂, ၂၀၁၇
သြစတြီးယား​မှာ နာဇီ​လက်ထက် သားကောင်​ဖြစ်ခဲ့​ရတဲ့ ယေဟောဝါ​သက်သေ ၃၁ ယောက်​ကို ဂုဏ်ပြု
တက်​ဟေး​ဘာ့ခ် မြို့တော်ဝန် မစ္စတာ ဂျို​ဟန် ဂို​ဘင် (အလယ်)၊ မစ္စတာ ပီတာ စ​တော့​ကား (ညာ) နဲ့ ပြည်နယ်​အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါက်တာ ပီတာ ကိုင်​ဇာ (ဘယ်)တို့​က အမှတ်တရ က​မ္ဗည်း​ကျောက်ပြား​ကို ဖွင့်လှစ်​ပြသ။
ဆဲလ်​တာ၊ ဂျာမနီ​—နာဇီ​တွေရဲ့ သတ်ဖြတ်​တာ၊ ချွေးတပ်စခန်း​မှာ ထောင်ချ​တာ ခံခဲ့ရတဲ့ ယေဟောဝါသက်သေတွေ​အတွက် အမှတ်တရ အခမ်းအနား​ကို ၂၀၁၇၊ မေလ ၁၉ ရက် မနက်ပိုင်းမှာ သြစတြီးယား​နိုင်ငံ တက်​ဟေး​ဘာ့ခ်​မှာ ကျင်းပ​ခဲ့တယ်။ အဲဒီ အခမ်းအနား​မှာ “အမျိုးသား​ဆိုရှယ်လစ်​ဝါဒီ​တွေရဲ့ သားကောင်​ဖြစ်ခဲ့​ရတဲ့ တက်​ဟေး​ဘာ့ခ်​နဲ့ အနီးအနားက” သက်သေခံ ၃၁ ယောက်​အတွက် အမှတ်တရ က​မ္ဗည်း​ကျောက်ပြား​ကို ဖွင့်လှစ်​ပြသ​ခဲ့တယ်။
သီဆို​သူ ၆၀ ဦး​ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့က “သက်သေ​များ ရှေ့​သို​ချီ​ပါ” ဆိုတဲ့ သီချင်း​နဲ့ အစီအစဉ်ကို စတင်​ခဲ့တယ်။ ဒီ​သီချင်းကို ကမ္ဘာ​တစ်ဝန်း​က သက်သေခံတွေ ဝတ်ပြု​ချိန်မှာ အခါ​အား​လျော်​စွာ သီဆို​လေ့​ရှိတယ်၊ မူရင်း​ရေးစပ်​သူက အဲရစ် ဖရော့စ် ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ​ကမ္ဘာစစ်​အတွင်း နာဇီ​တွေရဲ့ ဇာ​ခ်​စင်​ဟော​င်​ဇ​င် ချွေးတပ်စခန်း​မှာ ထောင်ချ​ခံရ​တုန်း ရေးစပ်​ခဲ့​တာ ဖြစ်တယ်။ သီချင်း​ပြီးဆုံး​တဲ့အခါ တက်ရောက်သူ ၃၅၀ ခန့်​ကို မစ္စတာ ဂျို​ဟန် ဂို​ဘင် (တက်​ဟေး​ဘာ့ခ် မြို့တော်ဝန်)၊ မစ္စတာ ပီတာ စ​တော့​ကား (တက်​ဟေး​ဘာ့ခ်​က နာဇီ​တွေရဲ့ သားကောင်​ဖြစ်ခဲ့​ရသူ ဂျော့ခ်ျ ဝေါ​ဖတ် စီ​နီ​ယာ​ရဲ့ မြေး)၊ ပါမောက္ခ ပီတာ ဂ​ယ်​ရှ​တက်​နာ၊ ပါမောက္ခ ဗင်း​ဇ​င့် ရော့စ်​နဲ့ ပြည်နယ်​အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါက်တာ ပီတာ ကိုင်​ဇာ​တို့​က မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့​ကြပါတယ်။ ဒီ​အခမ်းအနား​အကြောင်းကို သြစတြီးယား သတင်း​ဌာန​တွေ​ဖြစ်တဲ့ ORF 2၊ ORF ကန်​တဲ​န်​နဲ့ ဒေသခံ သတင်းစာတွေ​မှာ ဖော်ပြခဲ့​ကြတယ်။
ပါမောက္ခ ဂ​ယ်​ရှ​တက်​နာ​က တက်ရောက်​လာ​သူတွေကို မိန့်ခွန်း​ပြော​နေ။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်​အတွင်း သြစတြီးယား​က သက်သေခံ ၅၅၀ ထဲ​က ၂၁၂ ယောက်​ကို နိုင်ငံရေး​ကြားနေမှု​နဲ့ စစ်ကို​မထောက်ခံ​မှု​ကြောင့် ဂျာမနီ အမျိုးသား​ဆိုရှယ်လစ်​အစိုးရ​အတွက် အန္တရာယ်​ရှိသူတွေ​လို့ မှားယွင်း​သတ်မှတ်ပြီး ချွေးတပ်စခန်း​တွေ​ဆီ ပို့​ခဲ့​ကြတယ်။ ချွေးတပ်စခန်း​မှာလည်း သူတို့ကို ခွဲခြား​နိုင်ဖို့ ခရမ်းရောင်​တြိဂံ​ပါတဲ့ ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်​ခိုင်း​ကြတယ်။ သြစတြီးယား​က သက်သေခံ ၁၅၄ ဦး​ဟာ မီးလောင်​တိုက်​သွင်း ခံ​ခဲ့​ကြရတယ်။
ဒီ​အခမ်းအနား မတိုင်ခင်၊ နာဇီ​တွေရဲ့ အသတ်ခံ​လိုက်ရ​တဲ့ တက်​ဟေး​ဘာ့ခ်​က သက်သေခံ ငါး​ဦး​ကို (ဂျို​ဟန် စ​တော​စီ​ယား၊ အဲ​န်​တန် ယူ​ရမ်၊ ဂျော့ခ်ျ ဝေါ​ဖတ် စီ​နီ​ယာ၊ ဂျော့​ဝေါ​ဖတ် ဂျူနီယာ၊ ဝီလီ​ဘဲလ် ဝေါ​ဖတ်) စစ်​အတွင်း “ပျောက်ဆုံး​နေ​သူတွေ” စာရင်း​ထဲမှာ မှားယွင်း ထည့်သွင်း​ခဲ့​ကြတယ်။ ပါမောက္ခ ဂ​ယ်​ရှ​တက်​နာ​က ဒီ​အခမ်းအနား​နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ဒါက သမိုင်း​ရဲ့​အမှန်တရား​တ​ခု​ကို မြင်တွေ့​လိုက်ရ​တာ​ပဲ။ သူတို့ဟာ ယုံကြည်ခြင်း​အတွက် တကယ်​ရဲရင့်သူ​တွေ​ဖြစ်ပြီး လူ​မ​ဆန်​တဲ့​စနစ်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်​တွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး အောင်မြင်ခဲ့​ကြတယ်၊ အခု ဒီ​က​မ္ဗည်း​ကျောက်ပြား​က ဒီ​ပုဂ္ဂိုလ်​တွေကို အမြဲ​အမှတ်ရ စေမယ့်​အရာ​ပဲ” လို့ ရှင်းပြတယ်။
ဒုတိယ​ကမ္ဘာစစ်​အတွင်း နာဇီ​တွေရဲ့ သတ်ဖြတ်၊ ထောင်ချ ဒါမှမဟုတ် ဒုက္ခခံ​ခဲ့​ရတဲ့ သက်သေခံ ၃၁ ယောက်​အတွက် တက်​ဟေး​ဘာ့ခ်​မြို့က အထိမ်းအမှတ် က​မ္ဗည်း​ကျောက်ပြား။ က​မ္ဗည်း​ကျောက်ပြား​ပေါ်မှာ ဖရန့် ဝေါ​ဖတ် (အောက်​အကွက်​မှာ ကြည့်​နိုင်) ရဲ့ ကဗျာ​နဲ့​အတူ အရင်က စစ်​အတွင်း “ပျောက်ဆုံး​သူများ” စာရင်း​မှာပါတဲ့ တက်​ဟေး​ဘာ့ခ်​က သက်သေခံ ငါး​ဦးရဲ့ နာမည်ကို ရေးထိုး​ထားတယ်။
သြစတြီးယား​ရှိ ယေဟောဝါသက်သေတွေရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်​ရှိသူ ဂျို​ဟန် ဇ​င်​မာ​မဲ​န်း​က “ဆိုးရွား​တဲ့ နှိပ်စက်​ညှဉ်းပန်းမှု​ကြားမှာ ယေဟောဝါသက်သေတွေ တင်ပြခဲ့​ကြ​တဲ့ သတ္တိနဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကို အသိအမှတ်​ပြုတဲ့ ဒီလို​အခမ်းအနား​မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ လေးမြတ်ပါ​တယ်။ ဒီ​အခမ်းအနား​က နိုင်ငံ​အတွက် အန္တရာယ်​ရှိသူတွေ​ဆိုပြီး အုပ်စုငယ်​လေး​ကို မှားယွင်း နှိပ်စက်မှုတွေ​အတွက် သတိပေး​ချက်​တစ်ခု​ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်​ပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောခဲ့​ပါတယ်။
တက်​ဟေး​ဘာ့ခ်​က လွတ်မြောက်​သူ- ဖရန့် ဝေါ​ဖတ်
ဝေါ​ဖတ်​မိသားစု​ပုံ (ဖရန့်​ကို ဝိုင်း​ပြ​ထား)
နာဇီ​လက်အောက်ကနေ အသက်ရှင်​လွတ်မြောက်​သူ​ထဲမှာ ဖရန့် ဝေါ​ဖတ် (ဇန်နဝါရီ ၁၈၊ ၁၉၂၀ - ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၉) တစ်ဦး​ပါတယ်။ သူတို့ မိသားစုဝင် ၁၅ ဦး​စ​လုံး သက်သေခံ​ဖြစ်လို့ အဖမ်းခံ​ခဲ့​ရတယ်။ “ခုနှစ်​ယောက်​က အသတ်​ခံရတယ်၊ အများစုကို ခေါင်းဖြတ်​သတ်​တာ။ တစ်ယောက်က အဆိပ်​ဓာတ်ငွေ့​နဲ့ ကျန်တဲ့​သူတွေကတော့ ချွေးတပ်စခန်း​နဲ့ ဂတ်​စ​တာ​ပို ထောင်​မှာ သေဆုံးခဲ့တယ်” လို့ ၁၉၉၃ ခုနှစ် သူ့ အသက် ၇၃ နှစ်​တုန်း​က အင်တာဗျူး​မှာ ပြောခဲ့တယ်။ “(ချွေးတပ်စခန်း​မှာ) အစောင့်​တွေ​က တကယ်လို့ ဂျာမနီ​က စစ်ရှုံး​ရင်တောင် ကျွန်တော့်ကို​သတ်ဖို့ ကျ​ည်ဆံ​တွေ​ရှိ​တုန်း​ပဲ​လို့ နေ့တိုင်း​လို​လို ခြိမ်းခြောက်​ကြတယ်။” သူ့​အဖေ ဂျော့ခ်ျ၊ ညီ​ငယ် ဂျော့ခ်ျ ဂျူနီယာ၊ ဝီလီ​ဘဲလ် တို့နဲ့​အတူ ဂျို​ဟန် စ​တော့​စီ​ယာ​နဲ့ အဲ​န်​တန် ယူ​ရမ်​တို့ ငါး​ဦးရဲ့ နာမည်ကို ရေးထိုး​ထားတယ်။ က​မ္ဗည်း​ကျောက်ပြား​ပေါ်မှာ ဖရန့်​ရေးထားတဲ့ ကဗျာ​ထဲ​က စာသား​တချို့ကို ကိုးကား​ထားတယ်။ သူ အသတ်​ခံရ​တော့​မယ်​လို့​ထင်တဲ့​အချိန် သူ့​အဖေနဲ့ ညီ အသတ်ခံ​လိုက်ရ​ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြား​ပြီးနောက် ၁၉၄၄ ခုနှစ် ရိုလ်​ဝေါ​ချွေးတပ်စခန်း​မှာ ဒီ​ကဗျာ​ကို ရေးခဲ့တာ​ဖြစ်တယ်။
ငါ့​ယုံကြည်ချက်၊ ငါ​ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ရပ်တည်မယ်၊ . . . ငါ့​အစွမ်း​နဲ့​တော့ မ​ရပ်တည်​နိုင်။ ငါ့​အသက်​ရှိ​သရွေ့ မြဲ​မြဲ ရပ်တည်​နေမယ်၊ ငါ့ရဲ့​နောက်ဆုံး​ထွက်သက်​မှာ ရေရွတ်​တာ​ကို မင်း​ကြားမှာ - ငါ​မြဲ​မြဲ​ရပ်​နေတယ် . . .
Austria: Johann Zimmermann, +43-1-804-53-45
Germany: Wolfram Slupina, +49-6483-41-3110
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ သြစတြီးယား​မှာ နာဇီ​လက်ထက် သားကောင်​ဖြစ်ခဲ့​ရတဲ့ ယေဟောဝါ​သက်သေ ၃၁ ယောက်​ကို ဂုဏ်ပြု
ယေဟောဝါသက်သေတွေ ဘာကြောင့် စစ်​ထဲ ​မဝင်​သလဲ။